Masar - muddaaharaadkii 'ambabaxa' - BBC Somali
Masar - muddaaharaadkii 'ambabaxa'
4 Febraayo 2011
Image caption Masar - muddaaharaadkii 'ambabaxa'
Kumanaan masaari ah ayaa ku soo ururay maalintii 11aad bartamaha Cairo oo dalbanaya deg deg inuu isu-casilo mdaxweyne Xusni Mubaarak. Waxayna ku soo qulqulayeen fagaaraha Taxriir salaaddii jimcaha ka bacdi.
Ciidamo xoog leh ayaa lagu soo warramayaa inay aaga jooga, jawiguse waa ka degan yahay sidi maalmihii hore.
wasiirka gaashaandhiga Mohamed d Xuseen Dandaawi ayaa booqday fagaaraha Taxriir,lana hadlay dadka banbaanbaxaya.
Arbacadii iyo khamistii waxa dagaallamay taageerayaasha iyo mucaaradka madaxweyne mubarak. Madaxweyne Mubaaraka waxa uu sheegay khamiistii in haddii xukunka uu ka dego imika, in dalku gelayo jahawareer iyo fawdo,wuxuuna ka digay inururka Ikhwaan-al muslimiin ay dalka qabsanayaan.
Aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay inuu masuuliyiin Masaari ah ay kala hadlayaan sidii habsami xukunka loo wareejin laha.
Warar lagu qoray saxaafadda ayaa sheegay in mid ka mid ah tallaabooyinka la qaadi karo ee uu soo jeedinayo Maakanku ay tahay madaxweynaha oo deg deg xilka ugu wareejiya gole dastuur oo 3 xubnood ka kooban.
Dhinaca kale, dalalka US, UK, France, Jarmalka, Talyaaniga iyo Spain ayaa dhammaan waxay cambaareeyeen wax ay sheegeen inay tahay olole aan loo dulqaadan karayn oo ah caga jugleyn lagu hayo suxufiyiinta ka soo warramaya xasiloonidarida Masar.
Wariyayaal badan ayaa Masar lagu xiray, lagu garaacay, lagana qaatay qalabkii ay ku shaqeynayeen. Booliska Masar waxay iyaguna xidhxidheen xireen shaqaale ka tirsan ururada xuquuqda bani adamka ee Masar.